musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Eswatini Breaking News » Eswatini Hurukuro Inobvumirana nevose
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Montigny Yakakwikwidzwa naNeal Rijkenberg Gurukota razvino reMari reEswatini rakapiswa nevaPurotesitendi vakatsamwa
Vanhu vazhinji vakaurayiwa, mabhizinesi uye zvivakwa zvehurumende zvakaparadzwa, kutya hupenyu nemapurisa nevagari. Wese munhu zvino anobvuma mhinduro ndeyekutaura.
NeInternet yakavharwa chete chechitatu-bato ruzivo rwuri kubuda kubva kuHumambo hweEswatini. Nyika inowanzo runyararo iri kubata nemhirizhonga uye mhondi mhomho, uye vanogona kunge vari vapanduki vekunze.
Boka revagari vakashungurudzika, Prime Minister ari kuita, uye nharaunda yepasi rose vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano pakati pemapato ese uye kuwedzera kwechisimba nemabasa ematsotsi, sekuparadza mabhizinesi, kupamba, uye kuuraya.
Mwanasikana waMambo akasimbisa mubvunzurudzo yeFocus Africa neBBC kuti anofunga kuti Mambo akagadzirira kuteerera.
Panoita kunge paine musangano wepamutemo nerunyararo nevaratidziri vanoda shanduko muEswatini. Pakati pevaratidziri ava pane matsotsi anoda kuba, kuuraya nekuparadza. Kuedza kuwedzera-kukura mapurisa anotyirawo hupenyu hwavo. Kuita kuti zvinyanye kukura zvezvematongerwo enyika zvekunze zvakagadzirirwa kukurudzira gakava zvinogona kushanda kumashure.
Sezvo zvakaburitswa eTurboNews nenhengo dzepamusoro-soro muhurumende, uye nenhengo yepamusoro yeAfrican Tourism Organisation, zvinoita sekuti vapanduki vekunze vanga vachishanda muEswatini kubva pakutanga kwekukonana uku. Vamwe vevapanduki vekunze vakavhara migwagwa, vakapfeka yunifomu yemapurisa, uye vakauraya vagari kuti mapurisa apomerwe mhosva. Shamwari ye eTurboNews uyo akatiza Eswatini kutanga kwesvondo rino, akaona zviitiko zvinotyisa zvakadaro apo aifanira kutora nzira dzemumigwagwa achiedza kusvika pamuganhu weEswatini- South Africa
Maererano neimwe eTurboNews chirevo, rimwe rinotyaira mukukonana uku rinoita serine hukama Kuvimbika kwaEswatini uye neumambo kuchengetedza hukama hwehukama neRepublic of China, inozivikanwa seTaiwan. Izvo zvave zvichitsamwisa iyo Peoples 'Republic yeChina kwemakore. Eswatini ndiyo chete nyika yeAfrica ine Embassy yeTaiwanese.
Embassy yeUS yakanga yaonekwa zvakanyanya kutsigira zviitiko neTaiwan neEswatini.
BBC Focus Africa hurukuro nemwanasikana waMambo
Nepo kuratidzira kune runyararo kuri pamutemo kuchifanira kubvumidzwa, mamiriro ezvinhu akawedzera uye kuva chokwadi cheupenyu-nerufu kune wese munhu, varatidziri, hurumende, uye nevamwe vanhu vemuSwatini.
eTurboNews akanzwa kubva kumupurisa weEswatini. Aityira hupenyu hwake uye hupenyu hwemhuri yake mineti yega yega. Sekureva kwenhau, vagari vemuEswatini vanotya mapurisa zvakaenzana. Yasvika nguva yekutaura.
>> peji rinotevera kuverenga zvakawanda >>